Ndị uweojii 33 na-achọpụta na Jos Brech na-achọpụta ngwa ngwa kwa afọ! : Martin Vrijland
Ndị uweojii 33 na-achọpụta na Jos Brech na-achọpụta ngwa ngwa kwa afọ!
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 November 2018	• 0 Comments
Ọ bụ nyocha ngwa ngwa, n'ezie, ọ bụ ọrụ na - agaghị ekwe omume, ma na mberede ọ nọ n'ebe ahụ akwụkwọ ochie nke Jos Brech, bụ nke ọ gaara eji ụmụ okorobịa na-emeghị ihe ọjọọ mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. A na-atụle ikpe ahụ n'ọnọdụ ahụ, ma nke ahụ adịghị mkpa. Peter R. de Vries enwebeghị ike ịhazi oge a nile na kọntaktị ya nile n'ime ndị uweojii na achọtaghachiri nchekwa ahụ, ma na mberede, ọ dị ebe ahụ! Ukwu! Ọrụ ebube ndị ahụ abụghị nke ụwa, ha anaghị egbu ndị uweojii na ndị uweojii.
Tụkwasị na nke ahụ, a chọtawo akwụkwọ nchịkọta akụkọ! Nke ahụ bụkwa nnọọ nnyocha dị ukwuu! Ka anyị ghara ịmalite ozugbo banyere Photoshop na usoro ndị ọzọ. Nke a na-agba!
A naghị akpọ aha Jos Brech na isiokwu ahụ. Ọ bụ na ọ dịghị anya n'oge Jos Brech ga - abụ aha a họọrọ maka ndị na - enwe obi ụtọ nke ga - enyere aka n'ịkpụcha ọrụ a? Akụkọ ahụ na-amalite n'akụkụ niile nakwa n'ihi na ikpe na 12 Disemba na-abịa, ọ bụ oge maka mmalite na nkwado nke ududo.
O di oke nkpa ka i weghaara gi 28 September 2018 otu ihe. Ọ bụrụ na ị na-ebute ya nsogbu faịlụ zuru oke Iji gụọ, ị nwere ike ịchọpụta na anyị nwere ike ịme otu ihe dị mkpa bụ PsyOp nwere nnukwu nsogbu.
Nye ọtụtụ ndị, Otú ọ dị, ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka ị na-efegharị ya kpamkpam. A sị ka e kwuwe, anyị achọghị ka obi ghara isi anyị ike na nke ụwa nke mgbasa ozi kere. Nke a maara nke ọma na anyị achọghị ịbụ ndị na-agba izu ma ọ bụ akụkụ nke usoro ịkọwapụta dịka anyị na-ahụ na United States ma ọ bụ na UK maka Brexit (gụọ ebe a).
Ọzọkwa, ikpe na-abanyewo Saskia Belleman tweet circuses, ebe ọ na-adịghị onye ọ bụla na-ele anya dị egwu karị. N'ọnọdụ Nicky Verstappen bụ maka ọtụtụ afọ amaghi ma e nwere igbu ọchụ, igbu ọchụ, ma ọ bụ mmegbu, ma na mberede, enwere ike inwe mmezu tupu oge ikpebi oge. Ebibiri iwu iwu ọ bụla na akụkọ a, mana nke ahụ enweghị ihe ọ bụla, n'ihi na Peter R. de Vries na-enwe mmetụta nke ndị mmadụ na nne Nicky na-ebe ákwá. Nke ahụ na-arụ ọrụ ebube. Enweghị ihe ọzọ gbasara mgbagha. Mmetụta bụ nanị eri ahụhụ.
O yiri ka a na-akpọkarị anyị na-adịbeghị anya na nnukwu nsogbu nke DNA yiri ka ọ bụ ihe na-ekpe ikpe. Ọ bụ ezie na amaghị ihe ahụ, DNA bụ mgbe niile okwu anwansi. N'ọnọdụ Marianne Vaatstra, mgbasa ozi mgbasa ozi nna Bauke Vaatstra napụtara ahịa Machiavelli, ma Nicolo Machiavelli (onye a na-akpọ aha ahụ) bụ "ihe ọ bụla iji mee" na aghụghọ na aghụghọ. Ọ bụrụ na anyị ejiri nnukwu PsyOp (Psychological Operation) na-emekarị ka anyị kwenye na ihe nchekwa DNA dị mkpa dị mkpa iji dozie nsogbu igbu ọchụ, mgbe ahụ ma eleghị anya, anyị kwesịrị ileba anya na ihe nchekwa data dị otú ahụ pụtara. Kedu ihe ala nwere ike ime ya?
Ya mere, ebe ọ bụla anya dị na Pauw gosipụtara (lee ebe a) ka a gbanwere ya ka ọ bụrụ na ọ bụ 'DNA DNA nọ na ndị na-agba ume'na'a chọpụtala foto ụmụaka'na Gerald Roethof gara n'ihu na mkparịta ụka ahụ banyere ọgba aghara ahụ, ọ ghaghị ilekwasị anya n'ihe gbasara iwu nke iji DNA mee ihe site na mfu na-apụ apụ na ikpe ikpe ọnwụ (nke na-adịghị adị). Nke ahụ 'na-adịghị adị' etinyewo m n'etiti, n'ihi na (m na-emeghachi ya) ọ dịtụbeghị mgbe e gburu mmadụ ma ọ bụ ikpe ikpe ọnwụ mmadụ, ma ọ bụ okwu ọjọọ. Ụdị nkwado ọ bụla nke gosipụtara nke a na-efu. Nke ahụ bụ ikwu: NFI enwebeghị ike igosi igbu ọchụ, igbu mmadụ ma ọ bụ mmegbu. N'ihi ya, ọ dịghị ihe ọ bụla. Enweghị ikpe. Enwere DNA naanị na ndị nọ n'okpuru, ma egwuregwu ahụ na DNA ahụ enwetaghị iwu na-akwadoghị. Gerald Roethof nwere ike inweta Jos Brech n'efu. Ma oburu na enwere obi ebere maka nkwado nke nchekwa data gi, i choghi ka onye omekorisi a na-eme ihe n'echebe ya ka o wepuo ya. Mgbe ahụ, naanị ịchọrọ ime ka akụkọ ahụ dabere na ya site n'igosi na ị bụ ezigbo ọkàiwu.
Ya mere, okwu Jos Brech nwere ihe dị mkpa nke iwu. Ọ bụghị nanị na o mere - dị ka ihe ahụ Vaatstra - na echiche na DNA bụ okwu anwansi na ya mere anyị ga-ebuga ngwa ngwa gaa na nchekwa data nke mba. Nke ka mkpa, Gerald Roethof bụ ọrụ maka ịhụ na ọ dịghị ihe ọ bụla e mere maka iji DNA a anakọtara n'ọnọdụ ọzọ. Na nkenke: otu oge ị nwere DNA gị, steeti ga-enwe ike iji ya mee ihe ọ bụla! Capiche? Eji!
Ihe ndekọ njikọ njikọ: telegraaf.nl, justid.nl
E jidere Jos Brech n'obodo Castelltercol dị na Spen! Onye na-agụ ụda akwụkwọ na-enye ihe ntanye ọlaedo!
Ihe ikpe bụ Nicky Verstappen, onye na-eme ihe nkiri Jos Brech na enyi ọhụụ van 't Padje: ihe ịga nke ọma nke Peter R. de Vries
Ntak emi Jos Brech ama ekenen̄ede ama?
Ime ogbu mmadu na Nicky Verstappen - Jos Brech PsyOp
Tags: 1984, 1985, nchekwa, agba, chọtara, Jos Brech, umuaka, Nicky Verstappen, ịkwa iko, agadi, ikpe site na mgbasa ozi, eche, ikpe ikpe
" Google na - ewepu nsonaazụ ọchụchọ Jos Brech - Nicky Verstappen jikọtara Martin Vrijland
Ndị Block Frisians, ndị na-eme ihe ike na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị »
Nleta nile: 16.030.336